१ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
काठमाडौं । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी दुग्ध विकास संस्थानले बजारमा दूध वितरण गर्दा समेत त्यसबारे अझसम्म छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले छानबिन गर्ने विषयमा कुनै चासो देखाइरहेको छैन ।
अघिल्लो मंगलबार संस्थानबाट उत्पादित दूध गुणस्तरहीन पाइएको थियो । बालाजुमा अवस्थित काठमाडौं दुग्ध विकास आयोजनाले बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको दूध गनाउने र खानै नसकिने भएपछि व्यापक गुनासो आएको हो । सो दिन स्ट्यान्डर्ड र टिक मिल्कमा त्यस्तो समस्या आएको थियो । दूधको गुणस्तरीयतालाई लिएर व्यापक गुनासो आए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले त्यस विषयमा छानबिन गर्नेतिर खासै चासो नदेखाएको बताइन्छ ।
डीडीसीको दूधको गुणस्तरीयतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि कृषि मन्त्रालयकै मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीहरूले त्यस विषयमा चासो राखेका थिए । तर, डीडीसीले भने, ‘बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले आपूर्ति गरेको पानीमा क्लोरिनको मात्रा बढी भएकाले गन्ध आएको भन्दै हचुवा ढंगले आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ । डीडीसीले औद्योगिक क्षेत्रको गल्ती देखाएर पन्छिने काम गरेपछि विभागले पनि कारबाहीका लागि कुनै पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भने आफूले आपूर्ति गरेको पानीमा क्लोरिनको मात्रा बढी भएको कारण दूध गन्हाएको कुरालाई सिधै नकारेको छ । औद्योगिक क्षेत्रले बोरिङ गरेको पानी वितरण गरे पनि त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर मात्र वितरण गर्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
डीडीसीको उत्पादनमा समस्या देखिए पनि मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले अहिलेसम्म पनि छानबिन गर्न तत्परता नदेखाउनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । कृषि मन्त्रालय सम्हालेपछि कृषिमा सुधार गर्न आफू अग्रसर रहेको गुड्डी हाँक्ने मन्त्री अर्याल डीडीसीको दूध प्रकरणमा भने किन मौन रहेकी छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
डीडीसीको दूधमा समस्या आएपछि बिक्रीसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । एक हप्तायता दूधको बिक्रीमा ५० प्रतिशत कमी आएको सूत्रको दाबी छ । वितरकहरूले पनि गुणस्तरीय नसुधारेसम्म बिक्री गर्न कठिनाइ भएको भन्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको डीडीसीले नेपाली दुग्ध बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि बेलाबखतमा गुणस्तरीयतामा हेलचेक्रयाइँ गर्दा उपभोक्ताहरूले कम गुणस्तरको दूध खान बाध्य हुँदै आएका छन् ।
संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलको नालायकीले संस्थानमा भद्रगोल भएको हो । डीडीसीले पछिल्लोपटक बजारमा दुर्गन्धित दुध बिक्री गर्दै आएको आरोप लागेको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक पौडेलले डीडीसीको दुध उपभोग गर्नसमेत आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका छन् । डीडीसीको दुर्गन्धित दुध बजारमा बिक्री भइरहेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निगरानी बढाएको छ । विभागका कर्मचारीहरूलाई उपभोक्ताकर्मीहरूले गुनासो गरेपछि विभागले सक्रियता बढाएको बताइन्छ । पछिल्लोपटक धुलो पाउडर पानीमा घोलेर डीडीसी ब्रान्डको दूध बेचिरहेको डीडीसीको दूधबारे व्यापाक गुनासो आइरहेको छ । हेलो सरकारदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसम्म उजुरी परेको छ । तर नियामक निकायले खासै चासो देखाएको छैन । चासो राख्नेहरूलाई महाप्रबन्धक पौडेलले उत्पादनको कोसेली र अन्य आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको थाहा भएको छ । एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्न महाप्रबन्धक पौडेलले लाखौं खर्च गरेका छन् । आश्चर्य त के भने अघिल्लो दिन डीडीसीको दुर्गन्धित दूध बजारमा भनेर समाचार प्रकाशन गर्ने एक राष्ट्रिय दैनिकले नै महाप्रबन्धक पौडेलको खण्डनलाई विज्ञापन बनाएर प्रकाशन गरेको छ । खण्डनअनुसार चैत २४ गते बजारमा आपूर्ति भएका डीडीसीका केही लटका दूधमा फरक बास्ना आएको उपभोक्ताको गुनासो थियो । काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट उक्त कमजोरी भएको र पानीमा समस्या भएको पत्ता लागेको डीडीसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूधमा फरक बास्ना आए पनि स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने महाप्रबन्धक पौडेलको दाबी छ । यद्यपि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डीडीसीको दूधको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि ल्याबमा लगेको छ । ल्याबबाट रिपोर्ट नआउँदै पौडेलले स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर नगर्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले डीडीसीको दुधमा समस्या आएको र आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । पौडेलले दुर्गन्धित र विवादित बनेको डीडीसीको दुग्धजन्य पदार्थसेवनका लागि अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
कोरानाको अर्को खतरनाक भेरिएन्ट भेटियो, भारतमा अलर्ट जारी
लामो दूरीका गाडी सञ्चालनको तयारी
चिनियाँ खोप लिएर नेपाल वायु सेवाको जहाज आज आउँदै
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०८औँ जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ मनाइँदै
कोरोनाको जोनसन एण्ड जोनसन अमेरिकी खोप काठमाडौं आइपुग्यो